R2P တောင်းရ တဲ့ အကြောင်း အရင်း၊ CNN နဲ့ ဒေါက်တာ ဆာဆာ အင် တာ ဗျူး ကောက် နှုတ်ချက် – GaMone Media
Homepage / Local News / R2P တောင်းရ တဲ့ အကြောင်း အရင်း၊ CNN နဲ့ ဒေါက်တာ ဆာဆာ အင် တာ ဗျူး ကောက် နှုတ်ချက်
R2P တောင်းရ တဲ့ အကြောင်း အရင်း၊ CNN နဲ့ ဒေါက်တာ ဆာဆာ အင် တာ ဗျူး ကောက် နှုတ်ချက်
လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ R2P` တောင်းရတဲ့ အကြောင်းကို အဓိက မေးထားတဲ့ CNN နဲ. ဒေါက်တာ ဆာ ဆာ အင်တာဗျူးကောက်နှုတ်ချက် စီအန်အန်က မေးတာက လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ R2P` တောင်းရတဲ့ အကြောင်း ကို အဓိကထား မေး တယ်။ မေးတဲ့သူက နံမည်ကြီး စစ်သတင်းထောက်ပါ။သိၾကမွာပါ။
ဘယ်အချက်တွေကြောင့်ဆိုတာကို ဒေါက်တာဆာဆာ အကြမ်းဖျင်း ရှင်းပြတယ်။ နောက်သတင်းထောက်က ကုလအထူးသတင်းထောက်ပြောတဲ့ ပစ်တဲ့ သေနတ်အမျိုးအစား တွေ ကို ပြန်ပြောပြရင်း ဗွီဒီယိုနဲ.ပါ ပစ်နေတာကို ပြနေတယ်။ ပြန်မေး တယ်။ ဒေါက်တာဆာဆာ က ဟုတ်မှန်ကြောင်းပြောပြီး ရှင်းပြတယ်။
နောက်ထပ် မြန်မာဆိုင်ရာ ကုလ အထူး ကိုယ်စားလှယ် ရဲ. ဗွီဒီယိုနဲ. မြန်မာပြည်သူတွေကို ပန် ကြား တာကို ပြန်ဖွင့်ပြတယ်။ ကုလကိုယ်စားလှယ်ပန်ကြားတာက မအလတို.က မြန်မာပြည်သူ တွေကို အကြမ်းဖက်ပြီး ပြန်ခုခံတာမျိုးကို လုပ်စေချင် နေလို. မတရား အကြမ်းဖက်နေတာပါတဲ့။ ထောင်ချောက် ဆင်နေတာပါတဲ့။ မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ. အဲ့ထောင်ချောက်ထဲ မဝင်ကြဖို. တော င်းပန်ပါတယ်တဲ့။
အဲ့ဒါကို ပြပြီး ဒေါက်တာဆာဆာကို ဆက်မေး ပါတယ်။ မြန်မာပြည်သူတွေက ဘယ်လိုလဲတဲ့။ ဒေါက် တာဆာဆာက ငါတို. ပြည်သူတွေက သတ္တိရှိပေမယ့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုလားတယ်။ အခု ထက်ထိလည်း လုံးဝ လက်နက်ကိုင် ခုခံတာ မရှိဘူး။ လုံးဝကို မရှိတာ။ ဒါပေမယ့် အိမ်တံခါးနား ထိ မျက်ရည်ယိုဗုံးတွေ ပစ်ပြီး အကြမ်းဖက်တာမျိုး လုပ်လာတဲ့ ကေ့စ်တွေမှာတော့ ငါတို. မြန်မာ ပြည်သူတွေက သူတို. အတတ်နိုင်ဆုံး ခုခံတာတော့ လုပ်ပါတယ်တဲ့။ ဒါမျိုးခုခံတာကလည်း နည်း လွန်းပါတယ်တဲ့။
လူနည်းစု လူမျိုးတွေ လက်နက်ကိုင်တယ်ဆိုတာ တပ်က သူတို.နောက်ကို လိုက်ပြီး မတရား သတ် ဖြတ်လို.ကိုင်တာပါတဲ့။ အဲ့မှာ သတင်းထောက်က အခု ကမ္ဘာက ဘယ်သူမှ မင်းတို. ပြည် သူကို အပြစ်မတင်ပါဘူးကွာလို. ပြောပြီး ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို ပြတယ်။
ဓာတ်ပုံမှာ မြန်မာလို ရေးတာကတော့ သေးလို. ကျနော် ဖတ် မရဘူး။ အင်းဂလိပ်လို သတင်း ထောက်က ဘာသာပြန်ပြတယ်။ ဆန္ဒပြသူ တချို.တွေက အိတ်လေးတွေမှာ သူတို. သွေးအမျိုး အစားကို ရေးပြထားပြီး သူတို.အပစ်ခံရလို. ပြန်ကောင်းဖို. အခြေအနေ မရှိရင် မကယ်ပါနဲ.တဲ့။ သူတို. အင်ဂါအစိတ်အပိုင်းကို လိုအပ်တဲ့သူတွေအတွက် လှူပါတယ်တဲ့။ သတင်းထောက်က ပြော တယ်။ အရမ်းကို သတ္တိရှိတာပဲတဲ့။
ကြည့်ရတာ ဒေါက်တာဆာဆာ အဲ့သတင်းကို မသိသေးတဲ့ပုံပဲ။ သူချက်ချင်း စိတ်မကောင်းတဲ့ပုံ ပေါက် တယ်။ နောက် စကား ပြန်ပြောရင်း ဘယ်မျက်စိကို ပွတ်တယ်ဆိုတော့ ကျနော့် အမြင် မျက်ရည်ဝဲသွားတာလား မသိဘူးဗျာ။
ဒေါက်တာဆာဆာက ပြောတယ်။ ငါတို. ပြည်သူတွေကို ဒီလို အကြမ်းဖက်တာ အခုမှ မဟုတ်ဘူး ဆိုပြီး အရင် အရေးအခင်းအကုန်ကို ခုနှစ်တွေနဲ. ရွတ်ပြတော့တာပဲ။ ငါတို. အဲ့လောက်ခံခဲ့ရတာ တောင် အခုထိ အကြမ်းမဖက်ဘူး။
ငါတို. မြန်မာပြည်သူတွေ လိုချင်တာ ငွေမဟုတ်ဘူး၊ တခြား ဘာအကူအညီမှ မလိုဘူး။ ငါတို.လို ချင် တာ ငါတို. ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ လွတ်လပ်မှု၊ ဒီမိုကရေစီ၊ တရားမျှတမှု၊ ဖဒရယ် နဲ. ငြိမ်းချမ်းရေးပဲ။ အဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာက မိတ်ဆွေများအနေနဲ. ငါတို. မြန်မာပြည်သူတွေ ဖက်က ရပ်တည်ပြီး ငါတို. ဆုံးရှုံးသွားတာတွေကို ပြန်ရအောင် ကူညီပေးကြပါတဲ့။ ကဲ ပြီးရော။
ကျနော့် အမြင် CNN က နံမည်ကြီးစစ် သတင်းထောက်ကို သုံးပြီး အင်တာဗျူးကတည်းက ထူး ခြားတယ်။ ဒေါက်တာဆာဆာ တောင်းဆိုတဲ့ R2P ဝင်ဖို. လိုအပ်ချက် နဲ. ကိုက်ညီမညီကို နိုင်ငံတ ကာ သိအောင် စစ်ဆေးတဲ့သဘောလို. မြင်တယ်။ ကျနော့်ဘာသာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် Third party အနေနဲ. စဉ်းစားပြီး ကြည့်ကြည့်တာ ဒေါက်တာဆာဆာ ပြောတာကော သူတို.ရထားတဲ့ သတင်း တွေအရ R2P ဝင်ဖို. အချက်တွေ ကိုက် ညီတာ တွေ.ရတယ်။
အခုလောက်ဆို ကျနော်တို. ပြည်သူတွေရဲ. ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြမှုဟာ ဘယ်လောက် အထိ ထိ ရောက် နေပြီလဲ ဆိုတာကို မိတ်ဆွေတို. သိနိုင်ကြမှာပါ။
Previous post ရှေ့တန်းမှာ တိုက်ပွဲဝင် နေကြတဲ့ ပြည်သူတွေ အတွက် ဦးထုပ် နဲ့ မျက်လုံးကာ လှူဒါန်းသွားဖို့ ပြင်ဆင် နေတဲ့ သဇင်ထူးမြင့်
Next post ဒေါက်တာဆာဆာ နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း စိတ်အား ထက် သန်ပုံ နဲ့ လုပ်ဆောင် နေပုံ တော်တော်တူတယ်